मेरो नाक सानो मै लडेको कारण ले बिस्तारै बांगो हुदै आएको छ त्यो बांगो भएको कारण ले रुघा लागेको बेला नाक को दुवै प्वाल बन्द हुने र स्वास फेर्न गारो हुन्छ. के यो समस्या को केहि दिर्घकालिन समाधान छ ? छ भने के के हुन सक्छन? | Hamro Doctor
मेरो नाक सानो मै लडेको कारण ले बिस्तारै बांगो हुदै आएको छ त्यो बांगो भएको कारण ले रुघा लागेको बेला नाक को दुवै प्वाल बन्द हुने र स्वास फेर्न गारो हुन्छ. के यो समस्या को केहि दिर्घकालिन समाधान छ ? छ भने के के हुन सक्छन?
on Wed, Sep 26 2018 10:11 PM
प्रश्नको लागि धन्यवाद । यसको कारण लडेर पनि हुन सक्छ, वा कतिपयमा जन्मजात नाकको हड्डी बाङ्गगो हुने समस्या जसलाई Nasal septum deviation भनिन्छ । यसले साह्रै दुख दिएमा, वर्षमा धेरैपटक रुघाखोकी लाग्ने, नाक बन्द भएमा अपरेसन पनि गर्न सकिन्छ । यसको निम्ति एकपटक विस्तृत रुपमा परिक्षण गर्न नाक कान रोग विशेषज्ञलाई भेट्नुहोला। अनलाइन परामर्श मार्फत नाक कान विशेषज्ञसंग सल्लाह लिन यो लिन्कमा जानुहोला । https://www.hamrodoctor.com/service/ear-nose-throat
on Thu, Sep 27 2018 03:24 PM
i haveaproblem with my 8 yrs daughter that she gets bleeding... on Fri, Jun 14 2019 05:42 PM
विगत ६ महिना देखि मेरो नाक बाट पातलो सिगान बगी रहन्छ साथै हाछिउ... on Mon, Jun 03 2019 09:10 AM
what is the best solution for eye bags is it possible to treat... on Fri, May 24 2019 04:39 PM
Namaste , Mero Mami Lai Bigat 10/ 15 Din Dekhi Ringata Lagne... on Tue, May 21 2019 10:13 PM
खकार मा रगत देखिनु on Tue, May 14 2019 10:03 AM